Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka Oo Aqbalay In La Cafiyo 15-kii Xildhibaan Ee La Ganaaxay – Great Banaadir
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu aqbalay in Cafis loo fidiyo 15-kii Xildhibaan ee laga ganaaxay shan kulan, oo kamid ah Kulamada Golaha Baarlamaanka.
Xildhibaanadan ayaa Sabtidii lagu eedeeyay in Is-hortaag ku sameeyeen Kulan uu xilligaa Golaha Baarlamaanka ku lahaa Xaruntooda Magaalada Muqdisho, xilli Xildhibaanadu ka biyo Diidaneyd Qorshe socday oo sida ay sheegeen Muddo Kordhin loogu sameynayo Baarlamaanka iyo Madaxtooyada.
Xildhibaanadan ayaa maanta laga hor-istaagay inay ka qaybgalaan Kulan ay Xildhibaanada Golaha Baarlamaanka ku yeesheen Xarunta Filla Hargeysa (Villa Hargeisa) ee Magaalada Muqdisho, kadib markii Ciidan fara-badan lagu soo daadiyay Barraha Kontoroolada ee laga ilaaliyo Aqalka Madaxtooyada iyo Isgoysyada qaar ee Magaalada Muqdisho.
Xubno uu horkacayay Gudoomiyihii Hore ee Baarlamaanka Soomaaliya, Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) oo la kulmay Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka ayaa ugu baaqay in Guddoonka uu Cafis u fidiyo Xildhibaanadasi, taasoona uu Gudoomiye Mursal aqbalay.
Xildhibaanadan ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan Kulanka Maalinta Sabtida ay Golaha Baarlamaanka ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, haddii aanu qorshuhu waxba iska bedelin.
Qilaaf Kale Soo Kala Dhex Galay Madaxweyne Farmaajo Iyo …